China ngokwezifiso M10 iinyawo sokulinganisa ukuba abavelisi ifanitshala - Dongguan Qiaofeng Plastic Hardware Products Co., Ltd.
Ekhaya > Izahlulo zefanitshala zeplastiki > Iinyawo zokulinganisa ezinokuhlengahlengiswa > Iinyawo ze-M10 zokulinganisa ifanitshala
Ifanitshala iinyawo ezinokuhlengahlengiswa, ezibizwa ngokuba ziiphedi zenyawo, sebenzisa izikrufu ukudibanisa ezantsi kwefanitshala (iitafile, izitulo, izitulo) ukuthintela umgangatho ukuba unganxitywa, ukunciphisa ingxolo, kunye nokwandisa ukuphakama kwefanitshala. Injongo enkulu): iikhabhathi / iinyawo zekhabhinethi, njl. ilungele amatyeli amaninzi, iishelufa zedesika, njl.njl.Ufuna unyawo olunokuhlengahlengiswa ukugcina ingxolo ebangelwe yifenitshala yemihla ngemihla ngaphandle komqamelo xa ihamba, kwaye inokuthintela umgangatho ukuba unganxibi kwaye uvumele ifanitshala yakho isebenzise Umboniso wobugcisa: Ukuothusa kunye nokuyila ngobuchule, ukulahla umsonto, umgama ofanayo woxinzelelo kunye nokubonakala okuhle, ubugcisa.
Zithini iinyawo zefanitshala ezinokuhlengahlengiswa?
Iinyawo ezinokuhlengahlengiswa kwefanitshala, ekwabizwa ngokuba ziiphedi zenyawo, sebenzisa izikrufu ukudibanisa umazantsi wefanitshala (iitafile, izitulo, izitulo) ukuthintela umgangatho ukuba unganxibi, ukunciphisa ingxolo, nokwandisa ukuphakama kwefanitshala.
Ububanzi besicelo (umzimba omncinci, injongo enkulu): iikhabhathi / iinyawo zekhabhinethi, njl. ilungele amaxesha amaninzi, iishelfu zedesika, njl.
Ufuna unyawo olunokuhlengahlengiswa ukugcina ingxolo ebangelwe yifenitshala yemihla ngemihla ngaphandle komqamelo xa ihamba, kwaye inokuthintela nokuba kunxitywe umgangatho kwaye ifenitshala yakho mayisebenzise ngokuzolileyo.
Ubugcisa bobugcisa: Ukuothusa kunye nokuyila ngobuchule, ukulahla umsonto, umgama ofanayo woxinzelelo kunye nokubonakala okuhle, ubugcisa
[Igama lemveliso]: Iphedi yenyawo ehlengahlengiswayo
[Umzi mveliso wempahla]:Guangdong, China
[Umbala wempahla]: irabha emnyama yodwa / imibala emininzi
[Ukusetyenziswa kwemveliso]:Ifanitshala uhlengahlengiso unyawo pad
Ubukhulu:M10 * L35
Iimpawu Product:yomelele kwaye izinzile, inciphisa ingxolo, ikhusela umhlaba ekonakaleni
Ukusetyenziswa kwemveliso:ilungele ukudityaniswa kwetafile, iitafile, ilindle, njl.
Ukuthengisa ngokuthe ngqo kumzi-mveliso, ukwenziwa kwesiko
Ukupakisha kunye nokuthumelayeIinyawo ze-M10 zokulinganisa ifanitshala
Yamkela iiplastiki ezingafaniyo eziphambili, kwaye uprinta ilogo yakho kwiingxowa ezininzi.
Ivale ngentando yakho iyafumaneka.
Kuxhomekeka kubungakanani beodolo yakho emva komyalelo wokuqinisekisa
Ukuhanjiswa ngenqanawa ngenqwelomoya okanye ngolwandle njengoko ucelile.
1. Ngaba unayo umzi-mveliso wakho?
Ewe, singumvelisi eTshayina ngaphezulu kweminyaka eli-10. Efektri yethu ibekwe kwiPhondo Guangdong.
2. Ndingatyelela njani umzi-mveliso wakho?
Pls ngobubele sixelele kwangaphambili ukuba uceba ukutyelela. Singakubonisa indlela okanye sikulande esikhululweni okanye kwisikhululo seenqwelomoya.
3. Ngaba unikezela ngeesampuli zasimahla?
Ayongxaki, singathumela isampulu yasimahla yesalathiso.
4. Ngaba unokuprinta i-LOGO yenkampani yethu kwigama kunye nakwiphakheji?
Ewe. Singayamkela, eyona nkxaso ibalaseleyo inokunikezelwa kubaxhasi bethu.
5. Uya kwenza nini ukuhanjiswa?
Kuya kuxhomekeka kubungakanani beodolo yakho, ubungakanani obuncinci bokuhambisa iimpahla kwi-7-10days. lf iodolo yakho inkulu ngokwaneleyo, yenza iintsuku ezili-10-15.
6. Ungabugcina njani ubudlelwane obuhle kwishishini lethu ekuhambeni kwexesha?
a. Sigcina umgangatho olungileyo kunye nexabiso lokhuphiswano ukuqinisekisa ukuba abathengi bethu bayazuza;
b. Siyabahlonipha bonke abathengi njengomhlobo wethu kwaye senza ngokunyanisekileyo ishishini kwaye senze ubuhlobo nabo, nokuba bavela phi.
7. Ukuba siyayithenga imveliso yakho. Kodwa xa iingxaki zomgangatho zifunyenwe, ungazisombulula njani?
Emva kokuqinisekiswa, ukuba ingxaki esemgangathweni ibangelwa sithi hayi kwicandelo elingaphandle, siya kubuyekeza isiqwenga ngasinye kumthengi.
Iimpawu ezishushu: Iinyawo ze-M10 zokulinganisa ifanitshala, i-China, eChongiweyo, abavelisi
Iinyawo ze-M8 zokulinganisa ifanitshala
Ukulinganisa iinyawo M6 zefanitshala
Ifanitshala ehlengahlengisiweyo yokulinganisa iinyawo
Iinyawo Screw Adjustable izincedisi